सम्झौता भएको छ महिना बित्दा पनि पीडित नर्सले किन पाएनन् क्षतिपूर्ति ? | suryakhabar.com
Home स्वास्थ्य सम्झौता भएको छ महिना बित्दा पनि पीडित नर्सले किन पाएनन् क्षतिपूर्ति ?
on: १३ असार २०७५, बुधबार १९:११ In: स्वास्थ्यTags: No Comments
काठमाडौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले धर्मभक्त मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई सम्झौता बमोजिम पीडित नर्सलाई एक साताभित्र क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको छ ।
छ महिनाअघि मानवअंगमा कार्यरत नर्सद्वय त्रजिता जती र सजिना धौलालाई अन्याय भएको विषय बाहिर आएपछि देशव्यापी नर्स आन्दोलन भएको थियो । न्याय पाउनुपर्ने विषयसहित नर्सका अन्य विषयलाई लिएर नेपाल नर्सिङ संघको नेतृत्वमा आन्दोलन देशव्यापी बनेपछि गत माघमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल नर्सिङ संघबीच एघार बुदेँ सम्झौता भएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव डा पुष्पा चौधरीले कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई एक हप्ताभित्र सम्झौताबमोजिम क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएका छन् । तर कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने मन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा पत्र नआएसम्म रकम नदिने बताए । उनले भने, “मौखिक रुपमा भनेर कसरी दिनु मन्त्रालयले कुन शीर्षकबाट रकम दिने भन्ने खुलाएर पत्र दियो भने म एक मिनेट ढिलो नगरी पैसा दिन्छु, अन्यथा सकिँदैन, व्यक्तिगत रुपमा मैले दिने कुरा भएन ।”
पीडित नर्स सजिना धौद्याले अब क्षतिपूर्ति नपाए भोकहडताल गर्ने त्यसको जिम्मेबार मन्त्रालय, मानवअंग र नर्सिङ संघ हुने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्रालयले नै नेतृत्व गरी गरेको सम्झौतामा मानवअंगलाई लिखित पत्र नदिइनु विषयप्रति गम्भीर नभएको पीडितको भनाइ छ । मन्त्रालयले आइतबार अस्पतालका नाममा पत्र पठाउने बताइएको छ ।
सम्झौताको प्रोटोकल मस्यौदा चीन पठाइयो
१३ असार २०७५, बुधबार १९:११